Yintoni u-Ouya asigcinele yona? | I-Androidsis
UJavier Monfort | | Imidlalo ye-Android, Ezinye izixhobo
Ya sithetha ngo-Ouya kwaye malunga nesiphakamiso sayo: ukuba yi-desktop console, esekwe kwi-Android OS, apho unokuqhuba ngokukhululekileyo kwaye uphuhlise nawuphi na umdlalo ozelwe loo nkqubo. Into ethi, i-priori, ijonge ngaphezulu kokulungileyo; Ewe, ikhonsoli entsha ihlala ifunyenwe kakuhle njengoko ikhokelela kukhuphiswano olukhulu phakathi kweenkampani kwaye oku kufanelekile kumsebenzisi. Ukongeza, yabeka etafileni izimvo ezipholileyo ngokwenene, njengokukwazi ukonwabela ukudlala imidlalo yasimahla enjengeLigi yeLiges eyaziwayo okanye iinkonzo zokusasaza ezinje ngeTwitch.tv.
Kwiintsuku emva kwamarhe okuqala kunye namarhe, iqela elalisemva kuka-Ouya latsiba laya phambili laza laveza izimvo kunye nokusebenza kweprojekthi yabo entsha. Abantu abanjengomnye weprojekthi kunye neengcamango zabo zanyamalala, ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, uloyiko lokungaphumeleli kokuthengisa okutsha njengePhantom ngomhla wayo kunye nokukrokrela ukuba konke oku kuya kuhlala kumanzi e-borage. Kwakucacile, kwiintsuku kamva, ukuba Inkxaso evela kubathengi bexesha elizayo iyonke.
Ngokudibana kwabantu kwiKickstarter, injongo yayikukuphakamisa i-950.000 yeedola ukumilisela ibhetshi yokuqala yokunyusa kunye nokukhawulezisa izihloko zentengiso kwaye, ngaphezulu kwako konke, ukunxibelelana neenkampani zophuhliso lwexesha elizayo. Yiyo loo nto impumelelo ibiyiyo kwaye kwiiyure zokuqala ezingama-24 inani ekujoliswe kulo ligqithile. Okwangoku, ngokungabikho kweentsuku zokugqiba ixesha, Bashiyelwe kancinci ukuba bafikelele kwizigidi ezintlanu ezinesiqingatha zeerandi.
Inyani yile yokuba ngasemva kwengcinga elungileyo, inkxaso enkulu kunye nabantu abaqeqeshiweyo kunye noosomashishini abaqalise iprojekthi, kukwakho amabala amnyama athile afanele ukuphawula. Mhlawumbi eyona nto ithathe ingqalelo yabantu kukwazi ukonwabela yonke imidlalo yasimahla. Kwaye kuyinyani, kodwa ayisiyiyo yonke into njengoko bayiqaba. Ukuba umntu uthathela ingqalelo ulwazi kunye nenkqubo ka-Ouya kunye nabaphuhlisi bayo, kuyachazwa ukuba zonke izihloko ezikhoyo zekhonsoli ziya kuba nedemo yasimahla ekhoyo. Okanye, ngokufanayo, kuya kufuneka uhlawule imidlalo njengoko senzile ukuza kuthi ga ngoku.
Njengoko kuyinyani ukuba uluhlu lwezihloko esinokuzibona luluhlaza kakhulu. Elinye inqaku lokubeka izimvo kulo iya kuba licandelo lobugcisa; Ndifunde iiforamu, iiwebhusayithi kunye neeblogi apho abantu bacinga ukuba baya kuba nakho ukonwabela imidlalo ye-technical caliber ye-Skyrim okanye ye-Battlefield 3, ukubiza izihloko ezibini ezidumileyo. Akunakwenzeka oko Yonke into iza kuqhutywa kwiTegra 3. Akunakuphikwa ukuba yiprosesa enkulu, kodwa yeyama-smartphones. Ke ngoko, kuya kuba nzima ukonwabela izihloko eziphambili kule nkalo. Nangona kunjalo, jonga, andicingi ukuba u-Ouya wazalwa enolu luvo. Iprojekthi ibanga ukuba ngumboniso wokufikelela ngokulula kunye nezithintelo ezimbalwa kuzo zonke iintlobo zabaphuhlisi abazimeleyo. Kwaye, ewe, ndinomdla kakhulu.
Ndithethile malunga nokufana okuyingozi nokusilela kwe-Phantom u-Ouya wayebonakala ngathi uzinxibile. Kodwa i Iingxelo zikaJulie Uhrman, Umsunguli weprojekthi, apho aqinisekisa khona ukuba iprojekthi yakhe kwiKickstarter yayingeyonto ibango lokutsala umdla wabatyali mali kwaye babonise ukuba banesiseko esifanelekileyo somsebenzisi, abahlali kakuhle. Into esengqiqweni yokwazi ukuba imali oyityalile kwinto ethi, njengoko kuthenjisiwe, izakuqala ukuveliswa kungekudala kwaye ekuqaleni konyaka olandelayo inokuba semakhayeni ethu, ayisiyonto ingaphaya kobungqina bokuba le projekthi inekamva kwaye iyasebenza.
Okwangoku imeko yeconsole ayiqinisekanga. Inkxaso yabo evela kubasebenzisi, njengoko sisitsho, ayinakuphikwa. Kodwa kubonakala ngathi eyona nto ibalulekileyo ekugqibeleni, abatyali mali, ayisekho. Anditsho ukuba le yinto ephambeneyo, kuba indalo, ukuveliswa kunye nokuhanjiswa kwekhonsoli njengoko ithembisa ukuba injalo Ouya zixabisa ngaphezulu kakhulu kwezigidi ezine zeerandi. Ndicinga nje ukuba bebefanele ukuba baqalise ngotyalo-mali lwabucala kunye nesiseko esisekwe kunye nekamva, ukuya kubuninzi.
Ngokwam, andicingi ukuba bawusingathe lo mbandela ngeyona ndlela ifanelekileyo. Inyaniso yehafu kwinkcazo kunye nemidlalo ekhoyo, imihla engaqinisekanga, Izithembiso zokuba abazi nokuba bazokwazi ukuzalisekisa, njl. Sele nditshilo, kubonakala kum ngathi yiprojekthi enomdla ngakumbi ukuba sijonga ukuba eyona njongo kukuba sisixhobo esivulekileyo kuyo yonke into nakubo bonke abantu. Abo kuni balindele ukhuphiswano olunobukrakra kwiziqulatho zangoku okanye ezizayo, kuya kufuneka niyikhuphe loo ngcinga engqondweni yenu. Ngapha koko, kubonakala ngathi isekhona Ikho indlela ende ekusafuneka uhambe. Kuya kufuneka siqwalasele indlela izinto ezihamba ngayo.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Ouya, ikhonsoli yomdlalo wevidiyo esekwe kwi-Android, Ouya kwiKickstarter
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Ouya, ikamva elingaqinisekanga